यी सामाजिक मुद्दाको कहिलेसम्म बेवास्ता ? - Online Sajha	Online Sajha
यतिबेला विकास भनेकै भौतिक विकास भनेर बुझ्ने गरिएको छ। सडक, खानेपानी, विद्युत, सिँचाइ यस्तै–यस्तै विकास मात्रै प्राथमिकताको सूचीमा पर्ने गरेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, वातावरण संरक्षण, गरिवी निवारणका साथै असल शासनले पनि विकासमा ठाउँ पाउन थालेका छन्।
रोल्पा अस्पतालम अघिल्लो वर्ष पहिलो गर्भ जाँच गर्न आएका २ सय ५० मध्ये ३५ जना २० वर्ष मुनिका किशोरी थिए। जिल्ला सदरमुकाममा रहेको एक स्वास्थ्य संस्थाको तथ्यांक हो यो। स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराउने गर्भवती मध्ये २९.३ प्रतिशत संख्या २० वर्ष मुनिका किशोरीको हुने गरेको छ।
मुद्दा १ : बालविवाह
अघिल्लो वर्ष रोल्पा प्रहरीले मौखिक उजुरीका आधारमा ४३ वटा बालविवाह रोकेको थियो। समुदाय तथा विद्यालय स्तरमा गठन भएका बाल—क्लबहरुले बालविवाह हुन थालेको थाहा पाएपछि प्रहरीलाई उजुरी दिने संयन्त्र बनाएका छन्।
कक्षा ५ मा छात्राको टिकाउ दर ९७।४ प्रतिशत रहँदा कक्षा ८ मा यो दर ९४.९ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ। कक्षा तथा उमेर बढ्दै जाँदा छात्राको टिकाउ दर घटिरहेको देखिन्छ।
बालविवाहको यस्तो विकराल अवस्थाले जिल्लाको समग्र विकासमा प्रभाव पारिरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्राफ कमजोर हुनुको विभिन्न कारण मध्ये बालविवाह पनि एक महत्वपूर्ण कारण हो। हरेक कक्षामा विद्यार्थी किन घटिरहेका छन्रु उमेर बढ्दै जान्छ विद्यार्थी घट्दै गइरहेका छन्।
यसको कारक बालविवाह भनेर सजिलै पन्छिने काम भएको छ। बालविवाह किन भइरहेको छ? त्यसको उत्खनन कहिल्यै कसैले गरेन। बालविवाहलाई समस्याको रुपमा देखायो, पन्छियो। पारिवारिक र सामाजिक चालचलन तथा सांस्कृतिक रीतिस्थिति पो दोषी छन् कि१ कहिले अन्वेषण गर्नेरु सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यताले समेत बालविवाहलाई बढावा दिइरहेको छ। मौसमी बसाइसराई, गोठ बस्ने पराम्परा, मेला जात्राले बालविवाहलाई प्रसय दिइरहेका छन्।
मुद्दा २ः सम्बन्ध विच्छेद
अघिल्लो वर्ष रोल्पा जिल्ला अदालतमा जम्मा ३९९ मुद्दा दर्ता भएका थिए। त्यसरी दर्ता भएका मध्ये २१७ वटा मुद्दा श्रीमान—श्रीमतीबीच सम्बन्ध विच्छेदका लागि दर्ता गरिएका थिए। यो संख्या जिल्ला अदालतमा वर्षभरि दर्ता भएका कुल मुद्दाको ५३ प्रतिशतभन्दा बढी हो।
मुद्दा ३ः आत्महत्या
अघिल्लो वर्ष रोल्पामा एकै दिन फरक फरक तीन स्थानमा तीन किशोरीले आत्महत्या गरे। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका अनुसार रोल्पा नगरपालिका १० धवाङकी एक २२ वर्षिया महिला, सुनछहरी गाउँपालिका वडा नं। ६ फगामकी २३ वर्षीया महिला र लुंग्री गाउँपालिका वडा नं। ४ की १७ वर्षिया किशोरीले एकै दिन आत्महत्या गरे। एकै दिन भएका यी घटनाले रोल्पामा आत्महत्याको अवस्था कस्तो छ भनेर चित्रण गर्छ।
रोल्पामा एमसीसी खारेजीको माग गर्दै जनमोर्चाद्वारा प्रदर्शन
सरकारसँग सर्वोच्चले माग्यो खनाललाई उपचार खर्च दिनुको कारण
आर्थिक अभावका कारण मृत्युसँग लड्दै निमबहादुर